Fidèle Razara Pierre Raha misy tsy tokony homena fitondrana dia i Andry Rajoelina
Ambetin-tenin’i Fidèle Razara Pierre ao amin’ny Radio Az tantaniny ankehitriny ilay teny efa nambarany hatramin’ny fitondrana tetezamita manao hoe :
“Raha misy olona tsy tokony homena fitondrana dia i Andry Rajoelina”. Fantatro tsara ny tena fisainan’ity zandrikely ity amin’ny naha mpiara-miasa aminy akaiky ahy tamin’ny andron’ny tetezamita notantaniny fa izy dia manondrana sy manampatra fahefana rehefa mahazo fitondrana fa tsy mahazo an’izany ary izy izao jereo ity efa ataony. Ankoatra an’izay dia malaza amin’ny fampandriana adrisa sy fanaovana valala an-danitra ka asiako sira ihany koa ity kandida lah 13 ity ary havanana amin’ny fanaovana fampanantenana poakaty. Zavatra tena tsy tantin’ity sakaiza ity koa ny olona maneho hevitra manohitra azy sy milaza azy ho mpanongam-panjakana fa hitadiavany hirika hatrany ny handetehana sy hanapotehana azy. Azo antoka fa baiko avy aminy, ohatra, ny fanenjehana an’i Mbola Rajaonah ankehitriny izay nisafidy ny hanohana ny kandida Marc Ravalomanana lah25 izay tena tsy lanin’ny vavoniny tanteraka.